ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် VIDEO CONFERENCE စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါ သက်ရောက်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန် အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအဆင့် အထူးအစည်းအဝေး” သို့ ပါဝင်တက်ရောက် ‹ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် VIDEO CONFERENCE စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါ သက်ရောက်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန် အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအဆင့် အထူးအစည်းအဝေး” သို့ ပါဝင်တက်ရောက်
နေပြည်တော် ၊မေ ၁၄
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် ယနေ့ နေ့လည် ၁၃:၀၀ နာရီအချိန်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ၊လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ video conference ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် သည့် “အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါ သက်ရောက်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန် အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအဆင့် အထူးအစည်းအဝေး” ကိုပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေနှင့်အတူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံဖြစ်သော ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့်အလုပ် သမားအရာရှိကြီးများ နှင့်အတူ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Guy Ryder မှလည်းညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကိုပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသည် Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနှင့်ဒေသတွင်းရှိ အလုပ်သမားများအပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိလာပြီး အစိုးရများအနေဖြင့် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်အကိုင်များကိုကာကွယ်ရန်အတွက် ထိရောက်သောတုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်များ လုပ်ဆောင် ရန်နှင့်လူမှုအကူအညီအထောက်အပံ့မှတဆင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုဘဝကောင်းမွန်စေရေး ဆောင်ရွက် ရန်ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအတွင်းရေးမှုးချုပ်မှ COVID-19 ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှုကို အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ အများပြည်သူကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အထူးသဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားကဏ္ဍများ၌ ဆိုးရွားစွာ ခံစားကြရကြောင်း၊ လူအများ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်မွေးနေထိုင်မှုကို ထိန်းထားနိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးပြန်လည် နလန်ထူရေးကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှလက်တွဲ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြကြောင်း၊ COVID-19 ကို တိုက်ထုတ်ရာတွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ကောင်းမွန် သော‌ကျင့်သုံးမှုများ ၊အတွ့အကြုံများနှင့်ရရှိသော သင်ခန်းစာများအပေါ် အခြေခံဆောင်ရွက် သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ILO မှ COVID-19 Pandemic ကိုတုန့်ပြန်ရေး အကဲဖြတ်ဆန်းစစ် ချက်ကိုကူပြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအတွက်မိမိတို့ အာဆီယံနိုင်ငံများတွင်များစွာ အထောက်အကူ ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့အာဆီယံ အနေနှင့် ILO မှ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် “Post Pendamic recovery Plan” ကပ်ရောဂါကာလလွန် မြောက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထူမတ်ရေး အစီအစဉ်ကို ရရှိရေး စောင့်မျှော်လျှက်ရှိပါကြောင်းထည့် သွင်းပြောကြားပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အလုပ်သမားများ အပေါ် Covid-19 သက် ရောက်မှုများကိုတုန့်ပြန်မည့် သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ အစီအစဉ်များ၊ လူမှုအထောက်အပံ့များ အထူးသဖြင့် လုပ်ခလစာ/ဝင်ငွေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်သမားများ အထူးသဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော ကဏ္ဍများ တွင်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေး၊ကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထောက်ပံ့ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ကပ်ရောဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု ကြောင့် အလုပ်ရပ်စဲခံနေရသည့် အလုပ်သမားများကို အလုပ်ရှင်မှ ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းနှင့် လူမှု‌ဖူလုံရေး အထောက်အပံ့နှင့်အလုပ်လက်မဲ့ ခံစားခွင့်များထောက်ပံ့ ကူညီပေးနေသည့် အခြေ အနေများ၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် အများပြည်သူများအား အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အများပြည်သူသွားလာသည့်နေရာများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံ များမှ ပြန်လာသော ပြည်သူများအား quarantine centers အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ဆေးရုံများ ၊အားကစားရုံများ၊ သင်တန်းကျောင်းများနှင့် စာသင်ကျောင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းစင် တာများ နှင့်တရာစခန်းများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိစေခြင်းတို့အပြင် ဧပြီလအတွင်း ပြည်သူများ၏ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားခနှုန်းထားကို လျော့ချပေးခြင်းနှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော ပြည်သူများ အား အခြေခံစားသောက်ကုန်များထောက်ပံ့ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အခြားသော ဖြေလျော့ပေးထားမှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီးတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာကြသည့် အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများက Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်အကိုင်များ အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံအလိုက်အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ILO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Guy Ryder က အာဆီယံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများ၏ အထူးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပ၍ ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကြောင့် အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်အကိုင်တို့အပေါ် ထိခိုက်မှုကို စုပေါင်း အဖြေရှာမှုအတွက်အားရပါကြောင်း၊ ILOအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အရေး ကြီးသော သုတေသနနှင့်လေ့လာမှုများပြုလုပ်၍ အလုပ်အကိုင်လောက အတွက် အရေးကြီး သောလမ်းညွှန်ချက်များကို အာဆီယံအပါအဝင်အဖွဲ့နိုင်ငံများအားလုံးကို မျှဝေပေးခဲ့ကြောင်း၊ ကပ်ရောဂါကြောင့် ပုံမှန်လူနေမှုဘဝပျောက်ဆုံးနေပြီး အဆိုပါအခြေအနေ၌ပင် ပုံမှန်လူနေမှုဘဝ တစ်ခုကိုကြုံတွေ့နိုင်ပြီး အဆိုပါအခြေအ‌နေအရပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေကိုလူသားဗဟို ပြုပြန်လည်နလန်ထူရေးအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အဓိကထားဆောင်ရွက် ရမည့်လုပ်ငန်း (၄) ရပ်မှာ – (၁) စီးပွားရေးပြန်လည် အသက်ဝင်ရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်များကို ကာကွယ်ပေးရန် တုံပြန်မှုရှိ သောငွေကြေးမူဝါဒ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ (၂) အလုပ်အကိုင်ဌာန များ၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်လည်ရရှိရေးထောက်ပံ့ပေးရန်၊ (၃) လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းရှိ အလုပ်သမားများကိုကပ်ရောဂါပြန့်ပွားကူးဆက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးရေး၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် မဖြစ်မနေပေးရမည့်ဝန်ဆောင်မှုအစီအမံများ ဆောင် ရွက်ပေးရန်၊ (၄) ကပ်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေး အဖြေရှာရာတွင် ထိရောက်သောမူဝါဒ အစီအမံများချမှတ် နိုင်ရန် အတွက်သုံးပွင်ဆိုင် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆက်လက် ၍ ILO အနေဖြင့် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းနှင့် ကပ်ရောဂါကာလအလွန်တွင်လည်း လိုအပ် သလို ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်အကိုင်ရေးရာများအပေါ် COVID-19 ရိုက်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများ အထူးအစည်းအဝေးကို ၁၄–၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၃၁၅ နာရီတွင် video ConferenCe အဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ကြီးမားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် ကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများအပါအဝင် အလုပ်သမားအားလုံး ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ရပိုင်ခွင်များရရှိရေး ၊ရောဂါကူးစက်ခံရသော အလုပ်သမား များအား ခွဲခြားမှုမရှိဘဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးရေး၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား လည်းကောင်းတို့ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံများက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရေး၊နေရပ်ပြန် အကူအညီပေးရေးအပါအဝင် အလုပ်သမားများအပေါ် ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်မှုကို အကာ အကွယ်ပေးရေး၊ ထိရောက်ပီးတုန့်ပြန်မှုရှိသော နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ လုပ်သားဈေး ကွက်မူဝါဒချမှတ်ရေး အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရှင်၊ အစိုးရ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် ကပ်‌ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးနှင့် ကပ်ရောဂါ ကာလအလွန် ပြန်လည်ထူမတ်ရေး အစီအစဉ်အတွက် အသိပညာ သုတေသနရလဒ်နှင့် နည်းပညာအကူအညီ များမျှဝေရန် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။